U-AB De Villiers uzothatha isinqumo ngekusasa lakhe kumaProteas
U-AB de Villiers . BackpagePix
ZAHEER ADAMS | June 18, 2020
IMIZAMO yokubuyisela u-AB de villiers yo kumaProteas izoqala ngokumbona emqhudelwaneni omusha owaziwa nge-3TC oshaya ngomdlalo owodwa oba nama-over angu-36.
Lo mqhudelwano owethulwe ngoLwesithathu, uzobanjelwa eSuperSport Park ngoJuni 27 kanti kuzohlubana kuwo abadlali abahamba phambili ngekhilithi eNingizimu Afrika.
Uzophinde ube ngumdlalo wokuqala wekhilikithi osemthethweni eNingizimu Afrika kusukela kumiswe ezemidlalo ngoMashi nokwenze isizini ka-2019/2020 yacishwa.
Azoba mathathu amaqembu wonke agabe ngabadlali abayisishiyagalombili lilinye kanti isiwombe ngasinye kwezimbili zomdlalo sizoba nama-over angu-18.
Iqembu ngalinye lizophebeza i-innings eyodwa yama-over angu-12, azohlakaniswa iziwombe ezimbili (isigamu ngasinye siba nayisithupha). Miningi eminye imithetho ezobe iqala ukusetshenziswa.
UQuinton de Kock, ohola amaProteas kwikhilithi yebhola elimhlophe, uzoba ngukaputeni wamaKites kuthi uKagiso Rabada abe ngukaputeni weKingfishers. UDe Villiers uzohola i-Eagles okungamaqembu womathathu azonqwamana kweSolidarity Cup.
Amehlo azobe ethe nj kuDe Villiers (36), osekunesikhathi exoxa nomqeqeshi wamaProteas, uMark Boucher nomqondisi wekhilikithi kwiCricket South Africa, uGraeme Smith, bemunxenxa ukuthi abuyele eqenjini lesizwe abesewagaxile kulo.
It’s finally here! #3TCricket #SolidarityCup Get more info at https://t.co/lthxPiT5ZJ pic.twitter.com/4WZqgQZ7oE
— Andile Phehlukwayo (@andileluck19) June 17, 2020
UDe Villiers uwagaxe ngo-2018 emgibeni kodwa bese kunezingxoxo zokuthi uzobuya azodlala i-ICC T20 World Cup e-Australia ekupheleni kwalo nyaka.
Nokho akucaci ngalokho kusukela ukubheduka kweCovid-19 kulethe ukungabaza ukuthi umqudelwano uzoqhubeka yini ube ngo-Okthoba nangoNovemba njengalokhu bekuhleliwe.
"Ngicabanga ukuthi le ndlela entsha izoklama ibanga elikhulu,"kusho uDe Villiers. "Bengingakazithathi izinqumo ngokuqhubeka nokubambisna neCSA kulezi zinyanga ezingu-12 ezizayo. Kuzobonakala ezinyangeni ezizayo uma sesibuyele enkundleni sesiqalile ukudlala ikhilikithi."
Uma sekudlalwa lo mqhudelwano, bazobe bengekho abalandeli eSuperSport Park. Inhlangano eyenza inzuzo ngokusakaza ezemidlalo, iSuperSport, kodwa izowisakaza bukhoma lo mdlalo.
Abadlali bazogcinwa ekhempini izinsuku ezintathu endaweni efuthwe ngezibulalamagciwane ngaphambi kokuqala lo mdlalo
"Enkundleni wonke umuntu uzogqoka imask kanti imidlalo izohlala ivuliwe kanjalo nezinye ezokuphepha,"kusho uDr Shuaib Manjra, oyimedical officer kwiCSA.
📸 That moment when @QuinnyDeKock69 realises he's up against @KagisoRabada25 in the inaugural #SolidarityCup.#3TCricket pic.twitter.com/VMc1vptFm9
Lo mqhudelwano wamaqembu amathathu usungulwe yinkampani ezimele eholwa nguPaul Harris oyisikhulu esiphezulu kwiFirst Rand Bank aphinde abe yingxenye yenkampani yezokuxhumana ngomoya, iRain, uMark Nicholas obengumethuli wekhilikithi noFrancois Pienaar oayengukaputeni wamaBhokobhoko.
Akekho umdlali ophoqiwe ukuba yingxenye yomqhudelwano kanti uDale Steyn, ohamba phambili emlandweni weNingizimu Afrika ngokuwisa amawikhethi, nguyena umdlali omkhulu ongekho.
Quinny’s Kites: Quinton de Kock (c), David Miller, Temba Bavuma, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Beuran Hendricks, JJ Smuts, Lutho Sipamla